Manohana Ara-bola Ny Mozika Rock Tsy Tia Tanindrazana Ny Governemanta Ao Makedoniana Ka Tsy Faly Ny Vahoaka. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 11:47 GMT
Ankoatra ny fitakiana ny mozika mba hifanentana amin'izay nofaritan'ireo tsikera ho toy ny fotokevitry ny elatra ankavanana, heverina ho sahala amin'ny “kintana” tsy handiso fanantenana ireo nahazo ny fanampian'ny governemanta, izay mitahy “fanaporofoana” io sata io amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny komitim-panjakana, mikasika ny isan'ireo rakikira navoakany, ireo lanonana nokarakarain'izy ireo, sy ny sisa. Ambany fitantanan'ny Public Broadcasting Service MRTV ilay fifaninanana, mandalo aminà kaomisiona iray manokana.
Tsy nahatam-bava ilay mpikambana fahiny tao amin'ilay kaomisiona, Kosta Karev, nanoratra bilaogy fa raha ny marina dia tsy notakiana hanome porofo momba ireo fitakiana ireo ny mpifaninana. Nanoratra ihany koa izy hoe:
Ho fanampiana azy mba hamokatra hira roa, novatsiana 9.000 euros ny mpikambana tranainy iray hafa tao amin'ilay kaomity, Simeon Ivanov-Kango. Raha vao nalefa tao amin'ny YouTube ny iray tamin'ireo hirany, nitranga ny tabatabam-bahoaka, nitanisa ny haratsian'ny kalitaon'ilay lahatsary, hatramin'ny hery ananan'ilay tetikasan'ny governemanta mamporisika ny fanivanan-tena eny amin'ny ankamaroan'ireo mpanakanto sy ireo olomalaza hafa.
Iray andro monja, ny lahatsarin'i Kango tao anaty YouTube, nitondra ny lohateny hoe “Amanet” (teny tranainy be midika hoe “Lova” na “Didy miafina”), dia efa nahitana “tsy tia” maherin'ny 1.000, avy amin'ireo mpampiasa aterineto. Tao anatin'ny roa herinandro, nitombo ho 4.000 ny isan'ny “tsy tia”, miaraka amina “tia” zato fotsiny.
Naneho ny tsy hafaliany tety anaty tambajotra sosialy ireo olom-pirenena Makedoniana. Tao amin'ny ivontoeran'ny tetikasa Skopje 2014 no noraketina ilay lahatsary, izay nametraka ny taotrano “baroque” sy “néoclassique” tao afovoan-tanànan'i Skopje, manaraka ny fanirian'ny praiminisitra teo aloha mba hanome endrika “Eoropeana kokoa” ny tanàna. Raha niresaka an'io, nanoratra ny mpampiasa Twitter, Ann Bannann fa:
Lahatsoratra manesoeso iray teo amin'ny Mojo.mk nitanisa ireo karazana kalitaon'ny hira voafantina, miainga avy amin'ny fanatsaràna ny fahatokisan-tenan'ireo